nezinyuko ezisixhenxe endleleni ukholo | Apg29
Inyathelo lakho lokuqala endleleni yokholo.
Eli nqaku ibhalwe abo bamamkeleyo uYesu baza basinda.
Okokuqala, ndifuna ukuba kuvuyiswane ukuba uyifumene uYesu usindiswa! Yiyo le nto ilungileyo enokwenzeka nawuphi na umntu. Ngoku uqala ubomi enisinike entsha kunye noYesu Kristu.
Nditsho uhambo elide iqala njengenyathelo, othile wathi. Oku kubaluleke kakhulu ingakumbi xa kufikwa ukholo ukuhamba. Kuba ngoku uyakusindiswa kwaye baya ezulwini, oku akuthethi ukuba ngoku kuphuhliswa ngokupheleleyo kummandla yokholo. Kodwa ngoku Konke kuqala. Ngoku ukuphuhlisa ukufunda ukwazi uYesu ngakumbi.
Cinga usana: Kungokuba kakuhle aphuhliswe ngokupheleleyo? Yena akanako aqale ukubaleka, ukutsiba, umdaniso silubaleke le moto ngoko nangoko? Hayi, kodwa ukuba ke ukuba kukhule, uqale abaqhuba ukuze mhlawumbi uyakwazi ukusebenzisa le moto xa lixesha kuye.
Le ncwadana kufuneka ube malunga ukunyathela kwakho yokuqala endleleni yokholo. Wena ke zange ziphuhliswe ngokupheleleyo kuba ngoku zalelwe kuKristu. Nto inokwenzeka kuwe, efana umntwana Uwa phantsi kwaye ohlangana nayo. Wena nakanjani. Kodwa musa ukunikezela. Suka uye phambili kunye noYesu endleleni ukholo!
Inyathelo lokuqala Sele usenzile. Oko kwenzeka xa wacela uYesu ukuba angene entliziyweni yakho.
KwabaseRoma isahluko 10 ivesi 9 ithi:
"Ukuba uyatsho ngomlomo wakho ukuba uyiNkosi uYesu, wakholwa ngentliziyo yakho ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo, wosindiswa."
Igama kusindiswa nje lithetha "nisindiswe"! Oko akuthethi ukuba nomdlandla, befuna kunye ngenkuthalo nantoni na. Xa ndafumana uYesu, mna nje wasinda - kusindiswa!
Ezigciniweyo - evela ntoni? Wena wasinda, phakathi kwezinye izinto, kwisono ukuba ukulahlekelwa i esihogweni obungunaphakade!
Ukuze asindiswe, kufuneka uvume ngokuvakalayo ngomlomo wakhe ukuba uYesu yiNkosi, wakholwa ukuba uThixo wamvusa uYesu ekufeni. Ukuba abazanelisayo ezi mfuno mabini, uya ukwazi nge-100% ngokunyanisekileyo, ukuba usindisiwe ngoku. njani na loo nto? Kulungile, kuba iBhayibhile ithi njalo! Kubalulekile ukuba uthembe iBhayibhile xa kufikwa kwizinto ezifana nale. Awusoze into iimvakalelo oyithethayo. Iimvakalelo ngenye imini athi, "Owu, ukuba mnandi ukuba mna kusindiswa," yaye ngosuku lwesibini, mhlawumbi musa ngokwenene va ukuba usindisiwe. ngayo
Ayibalulekanga into yokuba "bavakalelwa" kodwa noko iBhayibhile ithi! ukuba uza kunamathela lo mgaqo elula ngoko kuya kuhamba kakuhle wena endleleni yokholo.
Ngokholo ukunyuka intaba, ukuze uhluleke ezahlukeneyo. Ngoko ke kubalulekile ukuba babambelele kuYesu. Ukuba wenza oko, uya kuhamba indlela ukholo luba ngakumbi.
Kukho iindidi ezimbini zabantu xa nezilingo neembandezelo. Omnye wabo kokubaleka kuYesu. Le yesibini abalekele kuYesu. Kwakungasekho basabele kude uYesu lufike ulahlo wokholo. Apho kunokuba ibaleke uYesu waba nokholo olomeleleyo.
Xa umntwana uya kufunda ukuhamba, uya kuphumelela. Uya kuwa anisekele. Ke yena uya kuba neenkani, vuka kwaye uzame kwakhona. Lo mthetho ebalulekileyo kuwe. Kusenokwenzeka ukuba uwe phezu umendo yokholo. Musa alale khona kwaye edangele. Vuka, cela uThixo ukuba andixolele aze adlulele kunye noYesu.
Njengokuba ikholwa entsha kwaye ngokuqinisekileyo izinto ezimbalwa imithwalo yakhe engalungileyo. Kule nkalo, kuya kuba konke kulungile. Kufuneka silandele uYesu size sihambe naye. azikho izinto ezintle umthwalo wakho uya kukunceda ukuba ayibulale xa lixesha. Yonke into akazange shwaka kwangoko xa bamkela uYesu yaye wasinda, kodwa izakulahleka kunye nexesha. Yiyo le nto ukuze elinye igama ebizwa ningcwaliseke.
Kwakhona ndifuna litsole elokuba kule meko ukuba kuyinto eqhelekileyo ukuba amakholwa amatsha kungekudala uza kufumana ukuhlaselwa kwamathandabuzo emba eqolo. Ewe, iqhelekile into nje kuphela, kodwa lihlala njalo! Kusenokuba kusasa, oko kuza emva, kodwa ngeke!
Kule hlaselo kwamathandabuzo uya kuba isiphelo ukuba simele siqhubeke ukulandela uYesu okanye ubuyele ebomini bakhe obudala. Ukuba ukhetha uYesu ukholo komelela kwaye niqinile!
Umntwana uya kufa ukuba ayithanga ukufumana ukutya. Ngendlela efanayo lenjenjalo nakuni. Kufuneka ukutya kokomoya kuwe. Musa na nakukufumana oko, uya kuba bangondlekanga ngokomoya yaye ekugqibeleni bafe ngokomoya nokholo lwenu.
Njani ukufumana ukutya? Uyakwazi ukufumana ukutya ngeendlela ezahlukeneyo. Phakathi kwezinye izinto, udle wena. Wena wenza oku ngokufunda iBhayibhile. Ukuba umtsha kwi ukufunda iBhayibhile, ndinicebisa ukuqalisa kwiTestamente Entsha (oko kukuthi enye inxalenye Bible), wayilesa yeVangeli kaMarko. Oku ukuze uqalise. Emva koko, Kakade ke, qhubeka ku hlaya Bibele hinkwayo.
Kukho abo bazama ukufunda iBhayibhile layigqiba. Ngenxa ikholwa entsha, oku kunzima ukukwenza. Nceda ufunde iyaqhubeka isahluko yeTestamente eNdala (oko kukuthi inxalenye yokuqala yeBhayibhile), kwaye kwiTestamente Entsha yonke imihla. Emva koko uya kubona ukuba ukholo lwenu luya kukhula.
Unako kwakhona nokufumana ukutya ngokuthi wakhonza! Yintoni ufumana ngokuya ibandla lamaKristu ukuba eshumayela lonke iLizwi likaThixo kunye kwibhayibhile uYesu! Ndinicebisa ukuba uqhagamshelane isonto nendawo ohlala kuyo. Ngaba wena uye ecaweni ukuze ndikwazi kukuvuyela ukukunceda ukuba umfownelwa. Okanye, ukuba uthe wabuyela i babeshiya omthembileyo. Ngoko ke, ngokuqinisekileyo kukunceda.
Wazi njani ukuba iNdibano unelungelo lokufunda? - siyavuma beNkosi uYesu, animele ukuba ayinandaba.
Kwaye ke kuthetha ukuba sikhululekile ngomlomo wakho uYesu. UYesu ayenzele nina yena
sifuna ukuba nobudlelane nawe. Ufuna ukuba athethe nawe yaye ufumana uthethe naye. Oku kubalulekile.
Ukuba uthanda umntu, wena ke ukwenza umzamo ukuthetha loo mntu. Ngendlela efanayo ke noYesu. Akuyomfuneko ukuba zizame okanye kwempixano naziphi izihlunu zonqulo. Hayi, kuye kwazenzekela. Thetha naye yonke imihla. Yitsho ukuba unayo kwaye bachithe ixesha kunye naye. Ukuba uyamthanda.
Andikwazi ukuthatha ngokucokisekileyo zonke iimfihlelo mthandazo apha, kodwa mna ndifuna ukukukhuthaza into eyodwa: UThixo ufuna ukuba athandaze. Ubiza oku izihlandlo eziliqela eBhayibhileni.
Isahluko 21 ivesi 22, uYesu uthi oku yeVangeli kaMateyu:
"Nakuphi enizicela emthandazweni kuni, njengoko ucinga."
UYesu uthi, koko apha unako ukufumana iimpendulo umthandazo malunga nantoni na cela!
Unako sithandaze kuYesu, kodwa uYesu ukhuthaza ukuba sithandaze ngqo kuBawo egameni likaYesu. Njengoko wakuthethayo yimpendulo yomthandazo! Loo isithembiso, uYesu uthi kuYohane isahluko 16 ivesi 23:
"Ngaloo mini aniyi kundibuza nto. Amen, amen, ndithi kuni: enithe nazicela kuBawo egameni lam, yena uya kukunika ".
Musa ukulibala ukuba simbulele uThixo ukuba lukusindisile, hamba ngoxolo. Bulelani kuba oko uYesu akwenzele zona. Ukuba wafa waza wavuswa. Ukuba uyaphila namhlanje yaye uye kuzixolelwa zonke izono zakho. ke
oku ngokoqobo kuwe ukholo lwakho luqine.
na ukuba ubuze nini? Impendulo ufumana iBhayibhile Eyokuqala KwabaseTesalonika isahluko 5 ivesi 17:
"Thandazani minkarhi hinkwayo."
KwiZenzo isahluko 2 ivesi 38 UPetros uphendula abantu into abaya kuyenza:
"UPetros wathi: 'baguquke baze babhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze izono zenu zixolelwe. Kwaye niya kwamkela uMoya oyiNgcwele njengesipho. ' "
Wonke umntu osukuba ngoko ukuba baguquke, kwaye yonke babhaptizwa. ILizwi likaThixo lithi kufuneka uvumele wena babhaptizwe. Wakugqiba ukwenza oku, kufuneka kwakhona isithembiso: ukunikezela ngoMoya oyiNgcwele njengesipho! Ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile zibandakanya usindiso yezi zinto zintathu: inguquko, ubhaptizo loMoya oyiNgcwele njengesipho.
Kufuneka uvumele wena mababhaptizwe egameni likaYesu Krestu. Ubhaptiza mntu igama ecaweni, kodwa oko egameni likaYesu. Kwaye Wena wabhaptizwa okanye nantoni na lobuqu, kodwa kusekhona kuYesu.
Wena babhaptizwa ngokuntywiliselwa ngokupheleleyo emanzini kwaye kwakhona ngoko phezulu njengokuba iBhayibhile ithi kwabaseRoma isahluko 6 ivesi 3-4:
"Anazi na ukuba thina sonke sibhaptiziweyo samanywa noKrestu Yesu, sabhaptizelwa ekufeni kwakhe? Ngoko ke ngu nobhaptizo ekufeni; nangcwatywa kunye naye, nathi ukuze siphile ubomi obutsha njengokuba uKristu wavuswayo kwabafileyo ngalo uzuko loYise, ".
Ubhaptizo Ukuvunywa engqongileyo ukuba ngoku bakaYesu. Wena ke, sabhaptizelwayo kuKristu Yesu, ukuze usoloko lilifa kuye! Ubhaptizo uphawu ngoku aye aguquka kuThixo.
KuMarko isahluko 16 nevesi 16, uYesu uthi:
"Lowo ukholiweyo wabhaptizwa, wosindiswa; ke yena ongakholwanga, wogwetywa."
Yamkelani uMoya oyiNgcwele njengesipho! Eli nyathelo sele ndisenzile lwaveza. Kufuneka amandla ukuze siphile njengomKristu uze wenze oko uYesu umthetho ngawe. Kananjalo kuya kufuneka uncedo kuhambo lwakho ngemihla kunye noYesu.
UYohane isahluko 14 iivesi 16-17, uYesu uthi oku:
"Mna ndiya kucela kuBawo, aze aninike omnye uMthetheleli, ukuze ahlale nani, uMoya wenyaniso, lowo ihlabathi lingenako ukumamkela. Kuba ihlabathi lingamboni, lingamazi nokumazi. Nina ke niyamazi, kuba uhleli nani, kanjalo uya kuba kuni. "
Apha ithi ukuba ihlabathi lingenako ukumamkela umthuthuzeli, kodwa likuvumela ukukholwa ku Yesu. UMoya oyiNgcwele sisipho ukuba siyamkele ngokholo. Ngendlela efanayo namamkelayo uYesu!
Wakuba bamamkeleyo uMoya oyiNgcwele, ukuze uqalise ukuthetha ngeelwimi njengoko kubhaliweyo kwiZenzo isahluko 2 ivesi 4:
"Kwaye Bazaliswa bonke nguMoya oyiNgcwele, baqala ukuthetha ngalwimi zimbi, njengoko uMoya wayebanika ukuba bathethe baphimisele."
Bonke bazaliswa nguMoya oyiNgcwele, baqala ukuthetha zonke iilwimi. IiLwimi uthi kwenye indawo eBhayibhileni. Umzekelo, kwiZenzo isahluko yeshumi kwivesi 45 no 46:
"Onke amaYuda athembekileyo weza noPetros;
ukuba isipho uMoya oyiNgcwele kaThixo kuphalazelwa phezu kweentlanga nazo. Kuba aziva zithetha ngalwimi zimbi, zidumisa uThixo. "
KwiZenzo isahluko 1 ivesi 8, uYesu uthi:
"Kodwa xa uMoya oyiNgcwele phezu kwenu, yaye niya kuba ngamangqina am eYerusalem nakulo lonke elakwaYuda naseSamariya, kude kuse nomhlaba."
Xelela abanye ngokholo lwakho kuYesu Krestu. Musa ukuyigcina kuwe. Wena abasebesindisiwe, zixolelwe kwaye babe nobomi obungunaphakade. Vumela nabanye lokuzibona into efanayo.
KwiZenzo isahluko 4 ivesi 20 le uvumo emangalisayo uthi:
"Thina, kuba yinxalenye yethu akakwazi ukuthetha into esizibonileyo nesizivileyo."
Ukuxelela abanye abantu ngoYesu yeyona ndlela ilungileyo neyona ineziphumo lokuzimela-akhule kwaye abe namandla elukholweni lwabo.
Ke kaloku uSawule, kamva ogama uPawulos, wasinda, ngoko nangoko waqalisa kungqina ukubaxelela ngoYesu. Ngenxa yoku, wavuka amandla ngakumbi. Unako ukufunda kwiZenzo isahluko 9 ivesi 22:
"Kodwa uSawule waba ngakumbi namandla ngakumbi, yaye amaYuda awayehlala eDamasko, njengoko wayengqina ukuba uYesu unguye uKrestu."
Musa ukuba neentloni kaYesu. Xa ume iinkolelo zakho, abantu baya kuba intlonipho kuwe. Wena kuzaliseke ukuba nguYesu.
"Kuba oko intliziyo izele, Umlomo uthetha."
Lo Yesu uthi kuLuka isahluko yesithandathu kwivesi 45. Ukuba into ngaloo nto-abathanda abantu abanjalo ekhatywayo, ngoko ke akukho ngxaki sithetha ngayo kunye nabahlobo bethu. Asazi nangayiphi na indlela ukwenza umgudu. Yiyo nje. Ngoku, Kakade ke, uYesu baguqula ubomi bethu. Ngaba ke ndithi ngaye kwabanye abantu?
Nantoni na eyenzekayo: Bamba kuYesu! Musa ukuvumela nantoni na ukufumana ukuba ushiye kuye. Yena yeyona nto ilungileyo ethe yenzeka kuwe!
ukuba uza kunamathela kuye de kwaba sekupheleni, uya kufumana Li koogqirha bezilwanyana isithsaba Ezulwini! Lo Yesu uthi iSityhilelo 3 ivesi 11:
"Mna kungekudala. Bamba into onako, ukuze kungabikho namnye usithabathayo isithsaba sakho. "
Onke la manyathelo zisixhenxe nje kwasekuqaleni. Oku kulapho kwenzeka:
- ukuhamba noYesu sele iqalile!